Laba gabdhood oo walaale ah oo ku geeriyootay hoobiye ay soo tuureen Al-shabaab (DHAGEYSO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Laba gabdhood oo walaale ah oo ku geeriyootay hoobiye ay soo tuureen Al-shabaab (DHAGEYSO)
Laba gabdhood oo walaalo ah ayaa halmar ku geeriyootay weerar hoobiye ah oo ay Xarakada Al-shabaab ku qaadeen degmada Qoryooley ee gobolka Sh/hoose.
Weerarkaasi hoobiyaasha ah oo gaarayay ilaa seddax ayaa sida la sheegay mid ka mid ah ku dhacay guri ay deganaayeen gabdhaha geeriyooday, waxaana sidoo kale dhaawac culus uu soo gaaray wiil 9 bilood jira oo ay dhashay mid ka mid ah gabdhahaas.
Labadaasi gabdhood oo dhinaca hooyada walaalo ka ah ayaa sida la sheegay lagu kala magacaabi jiray Khadiija C/laahi Nuur iyo Madiina Cismaan Cumar.
Hooyada labadaasi gabdhood dhashay oo lagu magacaabo Xaawa Aadan Cismaan ayaa idaacadda VOA-da laanteeda afka Soomaaliga u sheegtay in gabadha weyn ee lagu magacaabo Khadiija C/laahi Nuur ay booqasho uga timid magaalada Xamar, islamarkaana ay degmada Qoryooley ku sugnayd oo kaliya muddo 4 maalmood ah.
Sidoo kale, waxay hooyo Xaawo sheegtay in gabadheeda Khadiija ay laheyd uur 4 bilood ah, sidoo kalena ay wadatay canug ay dhashay oo 6 bilood jir ah, waxayna sheegtay in iyadii ay geeriyootay balse uu cunugeedii dhaawac culus soo gaaray.
Gabadha kale ee ku dhimatay weerarkaasi oo iyadane lagu magacaabi jiray Madiina Cismaan Cumar ayaa la sheegay inay 9 sano jir ahayd, waxayna hooyo Xaawo sheegtay in duqeynta loo geysto degmadaasi Qoryooley ay dhibaato aad u weyn ku qabaan dadka deegaanka.
Dhinaca kale, ururka Midowga Afrika ayaa si kulul u cambaareeyay weerarkaasi qasaaraha geystay oo ay Al-shabaab ku qaadeen degmada Qoryooley, mana jirto wax war ah oo ay Al-shabaab kasoo saareen weerarkaan lagu eedeynayo inay dad shacab ah ku dileen.